Ny iPad Pro 12,9-inch dia manalava ny entana amin'ny 17-30 Jona | Vaovao IPhone
12,9-inch iPad Pros dia manitatra ny fandefasana amin'ny 17-30 Jona
Izany dia zavatra efa nolazain'izy ireo taminay nandritra ny herinandro maro ary tato ho ato dia nanjary tena izy io, ny fotoana fandefasana ny iPad Pro vaovao 12,9-inch dia manana daty fandefasana antenaina mandritra ny tapany faharoa amin'ny volana Jona eo anelanelan'ny 17 sy 30.
Mazava ho azy, ireo fotoana fanaterana ireo dia lava mandinika fa nanomboka ny zoma 30 aprily lasa teo ny famandrihana. Miaraka amin'ny iMac sy ny Apple TV 4K vaovao dia nanokatra ny famandrihana ireo iPad Pro ireo ihany koa izy ireo, saingy tena avo tokoa ny fotoana fanaterana.
Apple dia efa nampitandrina antsika
Avy amin'ny orinasa Cupertino dia voalaza fa ny ora tokony antenaina dia tonga tamin'ny tapaky ny volana Mey fa rehefa nandeha ny andro na ny ora aza, nampitomboina ny fotoana fandefasana fatratra.
Ny maodely iPad Pro 12,9-inch irery misy fisehoana mini-LED misy ho an'ny fanaterana haingana kokoa izao dia ireo maodely 2TBIreo dia manana ora fanaterana manodidina ny 25 Mey 1 Jona.
Ny an'ny iPad Pro 11-inch, ny maodely 128 GB dia manana fotoana fandefasana ambany kokoa, amin'ity tranga ity ny 25 ka hatramin'ny 28 Mey. Raha tsy misy isalasalana dia toa ireo maodely 12,9-inch no be mpitady indrindra, ary raha te hanampy Magic Keyboard ho an'ireo maodely 12,9-inch ireo, tantara iray nitranga tamin'ny nanombohan'ny iPad Pro niaraka tamin'ny ity famolavolana fa ho tonga alohan'ny iPad Pro ny kitendry.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » 12,9-inch iPad Pros dia manitatra ny fandefasana amin'ny 17-30 Jona
Apple dia namoaka ny iOS 14.5.1 mamaha olana amin'ny mangarahara amin'ny App Tracking